Marka ganacsigaagu yahay internetka, mid ka mid ah go’aanada ugu weyn ee aad sameyn kartid wuxuu dooranayaa domínio magac.
Doorashada domínio magac ah waa sida muhimka ah ee loo magacaabayo ganacsigaaga – waa qeyb weyn oo ka mid ah alaabtaada.
Laakiin helitaanka magaca domainka waa mid ka adag inan imaneynin magaca ganacsiga – dhibco fiican ayaa ku adag. Inta badan kuwa wanaagsan ayaa horay loo qaaday.
Nasiib wanaag, waxaa jira isbeddello weyn oo ka dhacaya adduunka oo dhan kuwaas oo ku saabsan sidii loo diiwaangelin lahaa xayawaan weyn oo e u sahlan: Miyuu jaan-goynta dhabta ah ee dhabta ah? Miyuu nabdoon yahay em aad ganacsigaaga ku dhisto daba galka kale?
Halkan waa sida loola macaamili karo faa’iidooyinka yhashaaraha iyo adiga nafsadaada.
1 Aumento do Reino de Dom Domínios
2.1 TLD-yada cusub waxaa ka meados ah:
3 TLD de Maqnaanshaha Cusub
Aumento do Reino de Dom Domínios
Você também pode acessar Internetka, .com e ahaa kan ugu sareeya ee TLD. (TLD encerra com taagan tahay "heer sare ah," iyo waxay tilmaamaysaa dhammaadka domain sida sida .com, .net, .org, iwm.) "Dot com" wuxuu la mid yahay kan laftiisa. Ka fikir "Dot Com Crash"Sanadka oo dhan 2000 – ma aha dhammaan kuwa ku guuldareystay bilawga inay dhab ahaantii ahaayeen.
No kasta oo TLD-yada kale ay jireen bilawgii, midkoodna kuma riyaaqin. Waa waxkasta ogyahay, aqoonsanayaa, oo filaya inuu arko. 057-005 Dhab ahaanbuu u cadday Sababtoo ah xaaladeeda i muuqaalkeedii hore ee tobankii sano ee soo dhaafey, badi ugu fiicnaanta .com domínios ayaa hore loo qaaday.
Meelaha gaaban, kuwa la xusuusnaado tinha waxay iibiyaan qiimo:
Insure.com US $ 16 milhões em 2009
VacationRentals.com também comprou US $ 35 milhões em 2007
Internet.com vendeu US $ 18 milhões em 2009
Facebook wuxuu iibsaday FB.com US $ 8,5 milhões em 2010
Ganacsiga domainka ugu sareeya (novembro de 2017)
Haddii aad rabto em aad diiwaangelin cusub .com domaiN, waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid hal abuur leh oo aad u degto si ka yar-ka-fiican, haddii aadan awoodin inaad qariso lacagta tiknoolajiyada ee riyada.
ICANN (Shirkadda Internetka e Magacaabay Magacyada em Nambarada, hayadda e faa’iido doonka ahayn ee ka masuulka ah magacyada domain), todos os samsungy dhowr TLD o dheeraad ah tan iyo bilawgii, mostrando midkoodna uma soo. No ano de 2011, a ICANN lançou o xanibaadyo badan ku soo rogay sobre o TLD-yada cusub, sannadaha soo socda boqolaal cusub o kordhiyay ayaa la helayaa. Qof kasta ayaa codsan kara inuu abuuro qorshe cusub oo cusub oo TLD ah.
Daraasado kala duwan ayaa bilaabay inay diiwaangaliyaan magacyadooda caanka ah (oo ay ku jiraan .aaa, .aetna, .aol, .chrome, .chrysler, iyo kuwo kale oo badan), iyo kuwo kale oo badan oo xo ah, tLD ah odao tao ah, tao ah warshadaha, goobaha juqraafi, seu nome é hadi heli karo si loo diiwaan geliyo.
TLD-yada cusub waxaa ka meados ah:
TLD de Maqnaanshaha Cusub
.shaqaalaha $ 68,88 .bebê $ 64,88
.lat $ 25,88 .ri muito $ 12,88
.ac $ 32,88 .khamri $ 6,88
.arte $ 221,00 .cam $ 6,88
.eco US $ 13,00 .jogos US $ 9,88
.observador US $ 13,00 ciyaarta $ 188,88
.tão US $ 13,00 .tubo $ 25,88
.grau $ 6,88 .mamãe US $ 15,88
.daryeel $ 6,88 .dentista $ 31,88
.família $ 12,88 .adulto $ 79,88